Ny "be galona" no tompon'i Madagasikara ? | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Ny "be galona" no tompon'i Madagasikara ?
Telo taona mahery taorian’ny fanonganam-panjakana niarahany tamin-dRajoelina dia « tsy miova mihitsy » ny lohandohan’ny mpisorona ao amin’ny foloalinfdahy. Ny sasany efa nahavita trano maromaro, ny hafa nahavita nandany miliara tamin’ny mariazin-janany fa mbola « tsy miova » ry begalona. Isan’ny hery velona, raha izay no azo ilazana azy, nihaona tamin’ny iraky ny SADC notarihi’ni Fransman farany teo ireo be galona fanta-daza amin’ny fahaizana miaro ny sezan’i tgv. Ora dimy be izao no naharetan’izany dinika izany ary dia tsy nisy nety nanao fanambarana sady somary nilanja molotra avokoa izay nivoaka tao.
Raha tsiahivina ny zava-nitranga rehetra teto Madagasikara tao anatin’ny telo taona dia isan’ny manamora ny famoretana vahoaka sy ny fanaovana gaboraraka ny harem-pirenena ireto misandoka ho « tandroka aron’ny vozona » ireto. Ny aina nafoy, ny andramena mivoaka, ny entona mandatsa-dranomaso mandripaka ny fahasalaman’ny mpiray tanindrazana : asa-tanan’ny hery famoretana avokoa izany. Eny hatramin’ny herisetra amin’ny Renim-pianakaviana sady renin’ny vahoaka Malagasy dia mbola tafiditra amin’ny zava-bita ratsy indrindra vitan’izy ireo.
Taorian’iny fiverenan’ny vadin’ny Filoha RAVALOMANANA iny dia tsy vitsy ny efa nanantena fa mba hitondra fanovana eo amin’ny fomba fijerin’ny « be tsy miteny » ao anatin’ny Tafika iny tranga iny. Hatreto aloha dia tsy voamarina izany. Raha ny resaka mandeha mikasika ny diniky ny mpanelanelana sy ny « be galona » mantsy dia tsy manaiky velively ny hiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA izy ireo. Ny voamarina anefa hatreto dia maro an’isa amin’ny Malagasy no mitaky izany taorian’ny fahitana ny fomba fitondran-dRajoelina sy ny forongony. Zary pli-vava sisa ny hoe « miaro ny vahoaka sy ny fananany » satria ny seza sy ny fidiram-bola no tena arovan’izy ireo. Ireto « homme de troupe » anefa dia zara raha omena tambin-karama 15.000 Ariary isaky ny mandaroka grenady izay manao fitakiana. Ny any anaty birao kosa sady manabe hatoka sy kibo no mandray an-tapitrisany satria mandefa miaramila hiady amin’ny vahoaka ary tafakatra aman ‘arivony tapitrisa izany rehefa hanao izay hanakanana ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA. Ary mahery izy ireo rehefa manoloana tanam-polo fa raha vao mitam-basy ny mpifanandrina aminy dia vaky mitsoaka miverina an-dakazery izy ireo toy ny momba ny raharaha Remenabila.
Mbola misy azon’ny vahoaka antenaina ary ve amin’ireto « mpiasany » ireto ? Mpiasany satria mbola ny hetra aloan’ny valala be mandry aloha hatreto no andoavana ny saran’ny « hatsembohan’izy ireo ». Toa fanontaniana tsy hahitam-baliny io na dia hilaza aza ny maro fa TSIA no valiny. Raha ny fantatra tokoa mantsy dia misy ihany ny mahatsapa fa tsy rariny ny zava-misy saingy, hatreto aloha, mangina izy ireo. « Asa angamba atsy ho atsy » mety hivoaka amin’izany fahanginana izany ireo izay mba efa tonga saina. Enga anie tsy ho tara loatra ka efa tonga toa an’i Somalie ny eto amintsika vao hamaky takotra irery indray izy ireo. Tsy fanao, ary tsy hatao mihitsy, ny manao antso avo amin’ny « baïonnettes intelligentes » saingy inoana fa tsapany ihany fa avy amin’ny vahoaka izy ireo ka tsy maintsy hiverina amin’ny vahoaka. Mbola manana fotoana hanarenana ny hadisoan’ny namany vitsy an’isa tamin’ny 2009 izy ireo ka mba ho tsara endrika amin’ny mpiray tanindrazana amin’izay izany foloalindahy izany. Wait and See !